कुलमानको दैनिकी : खाने टुङ्गो छैन, घुम्ने फुर्सद छैन – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कुलमानको दैनिकी : खाने टुङ्गो छैन, घुम्ने फुर्सद छैन
अनलाइखबरको भेटमा कुलमानले सुनाएका थिए, ‘कहिलेकाहीँ चिकित्सकले भिटामिन डीको औषधी सेवन गर्नुपर्छ भन्छन् । अरु त खास समस्या छैन ।’कुलमानको दैनिकी कसरी बित्छ ? खाने–पिउने तालिका के छ ? कुनबेला उठ्छन्, कुनबेला सुत्छन् ? धपेडी र दबावबीच गुज्रने दैनिकीबीच आफूलाई कसरी ‘फिट एन्ड फाइन’ राख्छन् ?
दिनचर्या-कुलमान घिसिङ राति घर पुग्ने टुंगो हुँदैन । कहिले कार्यकक्षमै १० बज्छ । घर पुग्दा प्रायः सुनसान हुन्छ । सबै सुतिसकेका हुन्छन् । चिसो गाँस टिप्छन् । यस्तो, उस्तो खाने भन्ने छैन । घरको भान्सामा जे पाकेको छ, त्यही खाने हो ।
दिनभरको कामको धपेडी, थकानसँगै उनी ओछ्यानमा घुस्रन्छन् । गहिरो निद्रा पर्छ ।बिहान निद्राले छाड्दा पाँच बजेको हुन्छ । एक लिटर मनतातो पानी पिउँछन्, बाथरुम जान्छन्, फ्रेस हुन्छन् । शरीर हल्का भएपछि व्यायाम गर्छन् । केही आसनको योगाभ्यास गर्छन् । विगतमा उनी यस्ता आसन राम्ररी गर्थे, अहिले फुर्सद मिलेको छैन । त्यसपछि सामान्य हिसाबले शरीर तन्काउने, खुम्च्याउने, मर्काउने गर्छन् ।